CM Vakagadzira - Zvishandiso Zvokushandisa Zvishandiso
Zvikamu & Service
Iyo Inyanzvi Inonyanya Kubudirira Shandura Mutsara Unokosha weVashandi. Isu patentamende yekwenji yakagadzirirwa inoshanda pakushushikana kwepedyo zvakanyanya izvo zvinounza mhizha? Tsvina yakachena. Mipanga inogona kubhadharwa uye kushandiswa zvakare inowedzera hupenyu uye inoderedza mari.
Iyo Yakanyanya Mukutsvaga Kupera Technology.
Inobvumira kuparadzaniswa kwetambo kubva pamatairi emuchirwe mumushamba wakachena, wakachena, unobvumira mapurojekiti kuti awane migwagwa yemari kubva kumarubha nematare. Purojekiti "inoyerera-kuburikidza" yakagadziridzwa inoderedza pfungwa dzepineki kuti dzigone kubhadhara terenda yakawanda inosunungura mitambo mumhizha.
CM Granulator & Fiber Removal System inogona kugamuchira 6-19 mm minus wire pasina crumb uye inoigadzirisa kusvika ku 1-4 mm granulate rubber (10-20 mesh).
Zvikwangwani zvinoshandiswa kukakura zvinhu uye mweya inoshandiswa kubvisa yakasara nylon fiber.
A Superior High Bhuku Yakanaka Yakakosha System.
Ichi chitsva chinokera mill system ndiyo mutungamiri anozivikanwa mukufambira mberi kwekambanike uye simba rekugadzira. Iyo keroya inokwanisa kushandura rubber kuti iite zvakanaka mapfupa ari kubva ku 10- 80 mesh.
Kutarisa Complete Tire Yokugadzirisa Purogiramu Yese?
TONGA MAZVEDZI ECHOKWADI KWAKO - TARATIDZA NZUVA YEDU
NDIYE SHREDDER YAKO YOKUTANGA?
CM inodada kuisa mutsva wechinangwa chechinangwa chevashandi vane ruzivo rwemisepa matsva ekuvandudza uye kuwedzera twese shaft shredders simba.
• Chidimbu chimwe chete kana kutsiva banga kuisa maitiro akawanda
• Kuvandudza magetsi zvinhu zvakagadzirwa zviri nani nekupedzisira kwenguva refu
• Zvigadziriswa zvekare / zvinogadziriswa zvekushandisa kakawanda
• Inoderedza mazai evha uye nguva yokuderedza
DZIDZA ZVAKAWANDA NEZVEVANHU VAKASVA MWAM HYBRID
Unoda kuzviona muchiito?
Zvose CM Tire Shredders & CM Industrial Shredder Equipment inogadzirwa kuU.SA paSarasota, Florida factory
Mutengesi Mubasa: + 1 941.753.2815
Kupisa Technology, Innovation nhasi uye kupfuura. CM Vagadziri vave vaine nguva yakareba mberi kwemutambo-kuchinja zvigadzirwa. CM Shredder tsvina shredding systems inoshanda kushanda mumazana ezvimbo dzakapararira zvigamba zve 5 mune dzimwe nyika dzeC28, uye dziri kushanda kupfuura matairi mabhiriyoni gore negore pasi rose. CM Vashandi vanoshandisa kupinza kwekwenyanzvi, teknolojia yepamusoro yekwenisi, kusangana nevanoda nekutsvaga nyika yekutengesa kushanduka uye vave yakagadzikana zvikuru, yakavimbika uye yakapfuura mumashandisirwo emashandisi ekudzokorora.
Kubva munaDisemba 28, 2018 CM Shredder yakawanikwa uye yakabatanidzwa nemhuri yeBangal Machine yekambani yekuderedza mapoka, iyo inosanganisira kambani yadzo, Schutte Hammermill, mutevedzeri weNew York wakagadzira ruzivo rwakakura rwezvigadziriswe zviduku zvinosanganisira zvipfeko zvekunyora, bundu rakaputika, makagushers uye shredders zvinopa hutano husingachinji uye hwakanyatsogadzirwa.
Chii chaunoshandisa *
2019 © Copyright Industrial Shredders LLC. Kodzero dzose dzakachengetedzwa.
2019 © Copyright CM Shredders. Kodzero dzose dzakachengetedzwa.